Vesayenzi Vane Zvavasingazivi — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
w15 6/1 pp. 6-7
Zvinhu Zvose Zviripo Noupenyu Zvakavapo Sei?
“Munhu wose anovenga hama yake muurayi.”​—1 Johani 3:⁠15.
“Ibva pane zvakaipa, uite zvakanaka; tsvaka rugare, urutevere.”​—Pisarema 34:14.
“Mbeu yechibereko chokururama inodyarwa murugare nokuda kwevaya vanoita kuti pave norugare.”​—Jakobho 3:18.
“Jehovha anoongorora munhu akarurama pamwe chete neakaipa, mweya wake unovenga munhu wose anoda zvechisimba.”​—Pisarema 11:5.
“Usaitira shanje murume anoita zvechisimba, kana kusarudza imwe yenzira dzake. Nokuti munhu anonyengedzera anosemesa Jehovha.”​—Zvirevo 3:31, 32.
“Vana, teererai vabereki venyu munaShe, nokuti izvi ndizvo zvakarurama: ‘Kudza baba vako naamai vako’; uyo uri murayiro wokutanga une chipikirwa chokuti: ‘Kuti zvikufambire zvakanaka uye ugare panyika kwenguva refu.’”​—VaEfeso 6:1-3.
“Musatsamwisa vana venyu, asi rambai muchivarera mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha.”​—VaEfeso 6:4.
“Mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mudzimai wake sezvaanozviita; uyewo, mudzimai anofanira kuremekedza murume wake kwazvo.”​—VaEfeso 5:33.